Ifulethi / Igumbi elikufutshane nechibi - I-Airbnb
Ifulethi / Igumbi elikufutshane nechibi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHans & Eva-Lena
UHans & Eva-Lena yi-Superhost
Ifulethi / igumbi liseSätila malunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iLandvetter, imizuzu engama-35 ukusuka eGothenburg, engama-40 ukusuka eBorås, engama-45 ukusuka eVarberg kunye nama-60 ukusuka eUllared.
ISätila imi kumlomo weStorån ngasechibini elibukekayo iLygnern, elithatha i-15 km kumzantsi-mpuma ukuya elwandle. E-Sätila kukho iilwandle ezinde zesanti ezintle ezihamba imizuzu emi-5 ukusuka kwigumbi / kwigumbi.
Igumbi / indlu yi-37 sqm kunye neebhedi ezi-2 + 2 ezongezelelweyo (ibhedi yesofa), ishawa kunye nendlu yangasese.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2
4.97 · Izimvo eziyi-91
Ehlotyeni, kukho ukhenketho kunye nesikhephe i-ISA, ikopi ye-steamboat endala eyayisebenza echibini ekuqaleni kwenkulungwane yokugqibela. Isikhephe siqala kwi-120 yeemitha ubude bepier yomthi ngaselwandle.
E-Sätila kukho ivenkile yokutya, ibhanki, ugqirha, ugqirha wamazinyo, indawo yokutyela njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Hans & Eva-Lena